Inkampani Chinese Xiaomi ngesikhathi sako "kuqhunyiswa" emakethe zamadivayisi eselula. It uye wazakhela ifoni, ogama izici akuzona sibi kakhulu kunalokho okuboniswa umkhiqizo eziningi izinkampani okuholela, ezifana Apple noma Samsung, kuphela khona ishibhile. Ngaphezu kwalokho, China e-ingxenye lathathwa eziningi izici engcono ethengisa amafoni emhlabeni - iPhone (okusho graphic design ye-design yesistimu yokusebenza, ezinye izilawuli, nokunye).
Mhlawumbe, Xiaomi ngempela oyokwazi ukushaya Apple emakethe smartphone, kodwa kuze kube manje kuba - inkampani ethembisa esakheka amadivayisi enhle. On omunye imikhiqizo yayo, ifoni Xiaomi redmi 1S, sizobe ukukhuluma namuhla.
Smartphone kuchazwa kulesi sihloko basonta ongaphakeme ekilasini intengo Xiaomi imikhiqizo. Waphuma ngo-2014, futhi ngaleso sikhathi inani layo selifinyelele (shopping isilinganiso) ruble 7500 nje. Banikezwe izici zedivayisi (okuyinto thina uhlu ngezansi), kuba - ngentengo ephansi kakhulu leli thuluzi.
amakhasimende Target yocingo kungaba labo ufuna ezingabizi amafoni smart nge imisebenzi eyisisekelo, okungase ukunikela uhlelo lokusebenza Android. Ngo yengcebo impikiswano ukuthengwa kule foni ungase futhi wengeze nice isikhombimsebenzisi design (okusho MIUI ukuguqulwa, it uzokutshela kabanzi).
Ngokuvamile, ifoni Xiaomi redmi 1S - ukukhetha ezithakazelisayo ngokuya ukusebenza, ngoba yona ifakwe entsha (ngesikhathi udaba) processor kusukela Qualcomm, okuyinto siphinde sibe ulwazi oluthile. Ngokuvamile, funda futhi ufunde kabanzi mayelana nalesi smartphone.
Thina siqale ukubonakala imodeli umsebenzisi ukuqonda lokho anakho ukusebenza esimweni kuthenga. Ngakho, akukho lutho engavamile ngo-Xiaomi redmi 1S kithi ayikwazanga ukutholakala - a "isitini" elula omnyama plastic ecwebezelayo nge engele kwesokudla. Abanye abasebenzisi izibuyekezo zabo bathi lokhu design othile kungase kubonakale lulula kakhulu, noma edelela nokwedelela; kodwa ngesikhathi esifanayo, ukuvela kwalesi uhlamvu unezela nokuqina kwefoni ukunika izici isitayela wesilisa. Ayikho icala ukuba yayisithi entombazaneni, sibambe kule divayisi, kodwa smartphone Xiaomi redmi 1S omnyama okufana ifana "Ifoni boqobo sika." Nokho, akufanele ukucasula - iqoqo imibala kukhona ezimhlophe, lomtfubi, loluhlata kwesibhakabhaka futhi pink izinguqulo. Ukuze ukhethe, njengoba besho, kukhona inala.
Ngezansi ukubuka ngaphambili kudivayisi izihluthulelo ezintathu ngokomzimba ifakwe izibani ezibomvu. Lena - the "Properties" okuvamile, "kwekhaya" kanye "Emuva". Ngenhla kwesikrini kukhona idivayisi yekhamera yangaphambili.
Marginalia classically On ukhiye ofanele has uvule futhi ulungise umsindo futhi ikhava ezingemuva has a isokhethi wekhamera main kanye flash. logo Ngezansi anesithombe ngesimo incwadi inhlanganisela Mi.
Khombisa Xiaomi redmi 1S usayizi ifinyelela 4.7 amayintshi. Lapho lokhu - esekelwe IPS 720 nesincumo isihenqo 1280 Amaphikseli ubuchwepheshe, isithombe ukuminyana kwalo imayelana 312 pixels. Ukuze uvikeleke lapha, njengoba sishiwo encwadini Ukucaciswa, efakwe zokuzivikela Dragontrail ingilazi. Wabuye wathi ifoni isekela multi - sicindezelwe kanyekanye ezindaweni eziningana.
Emhlabeni Uhlaka isibonisi aminyene ngokwanele (endaweni yayo imayelana 36 amaphesenti wezindleko. Ngokusho ukubuyekezwa, abasebenzisi abasakwazi aneliseke sesikrini izinkomba ezinjalo wefoni uphinde uyithole isebenze ngempumelelo ezingeni eliphezulu.
Yamadivayisi kudivayisi Xiaomi ibhokisi nokuphathelene. Ngemva ukudalulwa, kuyacaca ukuthi ngaphakathi ifoni uqobo, ozinikele Xiaomi redmi 1S umyalelo (Nokho ngesiShayina, njalo ngokusebenzisa ke saba ukunikela), ishaja, waliguqula cord ngokudlulisela USB kanye bumper ukuvikela smartphone.
Ngokuphathelene izesekeli kufanele kuphawulwe ukuthi - Ukuthutha lalivamile kusukela Xiaomi. Abakhiqizi ngokuvamile ukunikeza amakhasimende abo Isobho, ephelele amafilimu zokuzivikela, izembozo kanye nezinye izindlela. Ngakolunye uhlangothi, lesi sifundo kithi - ifakwe zonke igajethi izinto ezinjalo. Ngakolunye - kuyinjabulo abasebenzisi uqobo lwabo, ngakho asikho isidingo ukubheka lezi-add-on eceleni.
inkampani yokukhiqiza liyaziwa yokuthi uzihlomisa kumadivayisi ayo anamandla, kanye ngesivinini esikhulu, 'nensimbi', futhi esimweni imodeli Xiaomi redmi 1S kunjalo. Ngesikhathi yomkhiqizo release, ke kwaba ifakwe enamandla Qualcomm MSM 8228 Snapdragon 400, uyakwazi ukukhulula imvamisa clock 1.6 GHz. Ngaphezu kwalokho, ingabe idivayisi inakho RAM, 1 GB, okuyinto ngempela ngokwanele ukudlala imidlalo yesimanje.
Kanye core ukusebenza ifoni isebenza ngisho sokuqhafaza imodeli Adreno 305. Ngosizo ifoni uyakwazi ukusebenza, kuhlanganise ne-3D ihluzo. Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa, umsebenzi core kungahlolwa kahle.
Njengoba kuphawuliwe echaza izici Xiaomi redmi 1S kudivayisi kufanele asebenzisa inguqulo i-Android 4.3. It zizobuyekezelwa 4.4.4 ngokushesha, njengoba nje abathengi ukuxhuma smartphone yakho ku-Wi-Fi kunethiwekhi yakho.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ngaso sonke Xiaomi setha zabo "bomdabu" GUI wrapper ngokuthi MIUI. Uma ngikhuluma iqiniso ukukhuluma - kuyinto mehluko oyisisekelo phakathi platform "Android" futhi kusukela umkhiqizi Chinese, empeleni. Kuyinto kuphela kahle yakhelwe idivayisi interface: icons ezintsha, eyenziwe isitayela Apple, e ingemuva umyela, nokunye okunjalo. Ngokusho ukubuyekezwa, abasebenzisi ukujabulela yokuthengisa ezifana - ngenxa yalokhu, cishe idivayisi kusukela kule nomkhiqizi futhi kwande kangaka emhlabeni wonke.
Njengoba ozinikele Xiaomi redmi 1S amashadi, ifoni ekuqaleni has 8 GB memory. Lokhu - isikhala "bomdabu", okuyinto oluthatha isigamu yesistimu yokusebenza, kanye nezinye kungenziwa besusiwe ngasiphi amafayela system. Ngokuya inkumbulo zezinsiza kanye ezihlukahlukene nezinye izinsiza (isibonelo, iqoqo movie akho owathandayo), bangakwazi ukulayishwa ivolumu ezengeziwe elivela ngokushesha emva uxhumano imemori khadi (kufika ku 64GB). Lona elula, ngoba wonke umuntu angasebenzisa ikhadi microSD, okuyinto idinga uma kucatshangelwa izidingo zawo. Uma unomuzwa wokuthi ngeke overload idivayisi kuyinto uchungechunge nzima futhi imidlalo, ungakwazi kalula ukuthenga ikhadi 8 noma i-16 GB futhi ungakhathazeki ngakho.
Sikhumbuza wena ukuthi izixhumi ngaphansi ikhadi zazifihlwa ngaphansi battery yefoni, kanye nezikhala amakhadi amabili-SIM.
Ngo redmi 1S has amakhamera amabili - front futhi bakhulise, isinqumo okuyinto ifinyelela 1.4 futhi 8 megapixel ngokulandelana. Ukwahlulela ukubuyekezwa, izithombe ngekhwalithi akwamukeleki lesi sigaba idivayisi. Ohlangothini isofthiwe ukwenza qualitative inhlolovo usizo ongakhetha ezifana ukutholwa kobuso, i-otho focus, HDR. Konke lokhu ndawonye kusikisela izithombe kangcono ngenxa ukucutshungulwa yabo ubuchwepheshe esetshenziswa Xiaomi.
Lena - okuyisici esibalulekile iyiphi i-smartphone ngoba izici zayo ukunquma esingakanani idivayisi bazokwazi ukusebenza ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe. Ngo-Xiaomi redmi 1S efakwe umthamo webhethri ka 2000 mah, ekusebenzeni esizovumela ubambe ucingo kuze kube 1 usuku umthwalo asebenzayo sezinsuku okungenani 2 ngaphandle nezingxoxo ezinde surf asebenzayo ngokukhulumisana ephathekayo.
Uma siqhathanisa ezahlukene Xiaomi redmi 1S libuyekeza izici kwamanye amadivaysi, kuba - isilinganiso ngokuba ingxenye.
Ucingo usebenza ngesisekelo GSM ejwayelekile, ukuze basebenze kuleli zwe ngaphandle kwezinkinga. Ngaphezu kwalokho, kukhona ikhono ukuxhuma kumanethiwekhi WiFi, Bluetooth-adaptha ukuze uthumele amafayela kuma-kwenye idivayisi, kanye GPS navigation kanye GLONASS. Idivayisi futhi ihlanganiswe FM-umamukeli.
On imodeli, okuyinto uchaza ukulungiselela isibuyekezo Xiaomi redmi 1S, konke esebenza kahle, nakuba inethiwekhi Izibuyekezo ukhuluma mayelana nokwephulwa emsebenzini module. Mhlawumbe incike inhlanhla ka umthengi, noma ngalesiya sikhathi iqembu ukhululiwe idivayisi engaphelele.
Ocingweni, ngokusobala okuyinto kungokwalabo ekilasini isabelomali amadivayisi naphezu kwalokhu, aqale amiswa ezinye yandiswe ewusizo. Mayelana nabo sizokutshela ku.
Ngakho, ifoni Xiaomi redmi 1S isekela Ikhampasi function gyro ne-accelerometer. Lokhu kuyandisa kakhulu isipiliyoni umsebenzisi ukuphatha izicelo ahlukahlukene futhi ngaleyo ndlela kwenza nokusingatha ifoni okuthakazelisayo kakhulu futhi ibonakala ingokoqobo. Iphuzu lesibili - kuyinto ukutholakala iphakheji software lesicelo, okubandakanya ukukhiqiza abahleli ukubuka namafayela hlela umbhalo, software isithombe nevidiyo module ukuthola imiyalo yezwi nokunye okunjalo. Ukuze wehlise kunomsindo ngesikhathi ingxoxo iyunithi efakwe umbhobho ozinikele elikuvumela ukuhlunga imisindo party futhi udlulise ingxoxo ngezwi ecacile.
Ekulungiseleleni lesi sihloko, thina, yebo, ngifuna Izibuyekezo mayelana nale divayisi, ukuqonda ngokugcwele ukuthi kuyini. Futhi uma thina ifingqe esikubonileyo, singasho ukuthi ngokuvamile, waneliseke nefoni. Amalungu ukupenda zonke isithunzi e ukhiye ukusebenza okuphezulu, ergonomic, zamanani aphansi, eliphezulu Yakha futhi isikhombikubona oluhle. Abaningi bathi umshini uphelele intengo.
Nokho, kukhona eziningi izici ezingezinhle okufanele ukusho, ukuze baqonde ukuthi abantu bavame ukuba nezinkinga uma asebenta nalelicembu imodeli. Ngakho, okokuqala, kuba - okweqile. Abanye bakholelwa ukuthi kuyinto - into evamile, elinye - ukuthi umshini ungafaka ngosuku olulodwa ngenxa okushisa ezinjalo. Yitjho amalungelo amaqembu - kunzima. Iqiniso lokuthi idivayisi ukufuthelana - ngempela iqiniso, kodwa umsebenzi wokugaya ehambisana nayo, ngakho asikho isidingo sokukhathazeka ngakho. Enye kusimo - a khulula battery. Abathengi aveze ukuthi abanye ifoni ngokushesha okukhulu ulahlekelwe ababaphathisiwe - empeleni for 3-4 amahora (naphezu izimangalo). Sikholelwa ukuthi batch engaphelele amadivayisi, engesiyo olinganiselayo energy ukusetshenziswa. Okwesithathu, abanye bathi nakanjani kudingeka Xiaomi redmi 1S firmware. Lokhu kungenxa yephutha ukuthi kwenzeka uma uthuthukela ohlelweni. Izimpawu ze-ke zimi kanje: smartphone isikrini sivala, awusebenzi yokusabela emiyalweni, futhi ngezikhathi ezithile kuphela ikhombisa okusebenza thwebula icon. Ukuze silwe kuphela le ndlela-ke. Nokho, uma ungazi kanjani ukukhanya le Xiaomi redmi 1S, akukuhle ukuba bathathe le futhi nje ukuthatha iyunithi esikhungweni sesevisi. Ukuze agqoke udinga ukusebenzisa isimiso esikhethekile futhi uthole impande kwesokudla yegajethi kuyobanga ukuthi isiqinisekiso singasebenzi olokugcina. Lokhu, phuca ilungelo ukukhulula ukulungisa esikhathini esizayo.
Yiziphi iziphetho safika ngokuhamba incazelo kwalo mkhiqizo? Ngokuqinisekile Ucingo muhle - it has a ukusebenza high, ikhamera enamandla, ibhethri, bese isikhombikubona enhle. Kodwa, ngesikhathi esifanayo, idivayisi akuyona into ekhethekile, ngoba izinkampani eziningi Chinese bayatfutfuka imikhiqizo efanayo. Futhi njengoba Xiaomi uhlose zikufice Apple kunombolo yokuthengisa Smartphones yayo, izinkampani kudingeka ngokucacile ukuba liqhubeke nokwenza ngcono ezintsha zabo, kanye ukukhipha okulandelayo, ngenhloso yokuheha umphakathi.
Ubumba ukugcoba buso ebusweni